calaamadaha uurka bilowga ah - iftineducation.com
iftineducation.com – Haddii qof dumar ah oo sugaya uurka, ka dibna waxa ay ku bixin doonaan fiiro gaar ah u calaamad kasta oo ka dhaca gobolka.
Dad badan ayaa aaminsan in calaamadaha ugu horreeya ee uurka – waa lallabo.
Marka ay haweeneydu uur yeelato, ka dibna waqti gaaban ka dib u jilciyaa habka difaaca jirka, tan iyo markii uu u leeyahay in uu u shaqeeyo laba. Natiijada habkan ayaa ka muuqan kara qabow, taas oo qaar ka mid ah ka raaedo ku qiyaastaan ​​ayaa waxaa lagu arki karaa sida ay calaamada hore ee uurka. Gaar ahaan haddii noocan oo kale ah “qabow” muuqday atypical markii this cudurka.
Sababta oo ah isbeddel ah ee ku shaqeynaya ee u shaqeeyo xanuunka uurka leh iyo caloosha mareenka. Haddii sabab u ah “duufaanka” caloosha ku jira oo aan midho wasakh ah ama wax u eg in, iyo shuban, kaas oo ka bilawday sabab la`aan, waxa laga yaabaa inay calaamad hore atypical ee uurka -. Si xiidmaha in bilowga uurka ka fal laga yaabaa xitaa in cuntada caadiga ah
Sida aad ogtahay, qaab dhismeedka jirka ah naag kasta si gaar ah, sidaa darteed calaamadaha uurka wuxuu noqon karaa aad u kala duwan. Haddii aad leedahay calaamadaha badan hore ee uurka waa laab, ka dibna qaar ka mid ah calaamadaha ugu horeysay ee uurka wuxuu noqon karaa mid ah “gluttony”. Xitaa gabdhaha waa si xasaasi ah oo ku saabsan iyada tiradaasi, waxay bilaabaan inay cunaan laba jeer sida ugu badan, ma aragto.
Xaqiiqdu waxay tahay in “xaaladda xiiso leh” ee jirka qof dumar ah ayaa bilowdey in habeyn. Isbedel waxay keeni in hormoonnada ah in ay bilaabaan in la soo jeedo oo ay isu dareemaan sayidkooda oo jidhka ka mid dumar ah. Natiijada “dheel dheel ah” hormoon dumar ah oo si fudud waa awoodi karin in ay xakamayso, iyo arrin ka duwan u dhaqmi karo, sida caadiga ah.
Qaar badan oo uurku waa kuwo xasaasi ah oo caadifad, qaylin laga yaabaa in Qoomaan wax. Dumarka qaarkood muujiyaan dheeraad ah oo kadis ah, ay u noqdaan oo baddelan hagaajiyey-gaaban. Xaaladdan oo kale, uur adag in ay ka farxiyaan, waxa aan jeclaan waxay ahayd “carooday” ay dhacdo waqtiyada qaar.
jiro adag oo xiqdi ah “beremenyashku” xumeeya karo lana imaan karo ooyaysa xitaa kaftan ugu dhib lahayn;
Si aad u taxdo dhamaan calaamadaha uurka waa wax aan macquul aheyn, maxaa yeelay, naag kasta, muddo ah – uu. Iyo xaqiiqada ah in qof dumar ah oo uur leh waxay ahayd calaamad u ah ee ninka yar gudaha kale waa xaalad caadi ah.